Tawhiida Archives - Page 5 of 12 - Ibsaa Jireenyaa
September 13, 2019 Sammubani Leave a comment
Ahmad Salaam akkana jedha: “Nabiyyiin (SAW) dhufuun dura, namoonni Rabbiin Uumaa samii, dachii fi wantoota isaan keessa jiran akka ta’e ni amanu turan. Garuu gosoota ibaada gargaraa keessatti Rabbiin waliin wanta biraa gabbaru. Kanaafu, Islaamni yaada Rabbiin Gooftaa tokkicha ta’uu qulqullessuu fi hubanna sirrii kennuuf dhufee. Akkas gochuun, namoonni Rabbii tokkicha sirnaa fi haala sirrii ta’een ni gabbaru. Garuu kana galmaan gahuuf ykn tuqaan ka’uumsaa, maqaalee fi sifaata Rabbii ilaachisee beekumsaa fi hubanna sirrii qabaachudha. Yoo namni maqaalee fi sifaata Rabbii ilaachisee beekumsaa fi hubanna sirrii qabaate, inni gonkumaa Rabbiin alatti eenyuttillee hin garagaluu ykn Isaan ala eenyullee hin gabbaru. Kanaafu, maqaalee fi sifaata Rabbii sirnaa fi bal’innaan hubachuun bu’uura gosoonni tawhiidaa biroo itti guuttamaniidha. Itti fufuun ni jedha: Tawhiidu Ar-Rubuubiyyan [qalbii keessatti] akka mukaati. Hiddi isaa immoo tawhiidu al-asmaa’a wa sifaati dha. Yoo hiddi ykn bu’uurri hin jiraatin, mukni mataan isaa dhukkubsataadha ykn dadhabaadha.”